Ukuphupha irekhodi le-vinyl Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha irekhodi le-vinyl. Esi sikhokelo malunga nentsingiselo yamaphupha siya kuba nomdla kubo bonke abo bafuna ukwazi indlela yokuwatolika.
Iidiski zikhulu, zimnyama, ziisetyhula abathwali bezandi. Ngokudibeneyo, zihlala zibizwa ngokuba yi "disk" okanye ngokulula "ipleyiti." Idiski edlala ixesha elide, enexesha elide lokudlala, ibizwa ngokufutshane njenge-LP, idiski enengoma enye okanye ezimbini.
Kwixesha elidlulileyo, umculo wabaculi wawuthengiswa kwiidiski ngokungagqibekanga. Ekugqibeleni ezi zathathelwa indawo yiCD encinci kakhulu, isilivere "compact disc." Namhlanje oku kuthathelwa ingqalelo kuphelelwe lixesha, kuba uninzi lomculo ngoku unikezelwa ngokubanzi kukhuphelo lwedijithali ngokunjalo. Bambalwa kakhulu abantu abanomdlali werekhodi; ikakhulu, abathandi IVinyl ngabo bamamela ngononophelo umculo wabo kwisixhobo esidala, njengoko umgangatho wesandi ukhethekile.
Nangona kunjalo, irekhodi lisenokubonakala njengomqondiso wephupha. Kwenzeka ukuba siphuphe ukubona enye, siyimamele, okanye mhlawumbi siphethe umntu ongatshatanga kumculi wethu owuthandayo kwifom yediski. Athetha ntoni la maphupha?
1 Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ophupha ngokubukela okanye ukudlala irekhodi unokukuqonda oku njengophawu oluqinisekileyo ngekamva labo. Isimboli ithi phu melela kunye nobutyebi phambili. Imicimbi yeshishini iya kukhula ngokuthanda kwakhe. Kodwa umntu ochaphazelekayo uya kwaneliswa ngobomi bakhe abucala. Uhlala e ukuvumelana Kunye noontanga bakho, unokuqiniseka kubahlobo kunye nosapho.
Kwakhona, ukuthenga irekhodi le-vinyl ephupheni kunokuba Iindaba ezimnandi. Oku kungekudala kuya kufikelela kwabo bachaphazelekayo. Ummangaliso omnandi unokukulindela kule meko. Kuyafana ukuba umntu uphupha ngokunikwa irekhodi.
Iphupha apho lo mntu kuthethwa ngaye eyimvumi ngokwakhe kwaye efumana irekhodi legolide ukuqonda ufumana umsebenzi wakho kubomi bemihla ngemihla. Oku akuyomfuneko ukuba ibe bubugcisa, kodwa zinokunxulumana nezinye izakhono zakho ozincomayo kwabanye.
Imijelo yediski inokubonakala ngathi iyajikeleza ephupheni. Ke ngoko, kwimeko enjalo yamaphupha, kusengqiqweni ukusebenzisa imiba yesimboli yamaphupha "ajikelezayo".
Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolika kwengqondo
Iirekhodi zidibanisa abantu abadala abaninzi kunye nexesha elidlulileyo, ubuntwana kunye nolutsha. Ukuba irekhodi libonakala njengophawu lwephupha, emva koko ngokwembono yengqondo, kule meko, kunokuba yingxabano nabanye abantu. iinkumbulo okanye ubonise amava. Amava athile obomi bokwenyani ababuyisele ekuphupheni.
Ngokwendlela yokusebenza kwengqondo kwintsebenzo, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ubumamele mculo mni. Ngaba yayingumculo wokumatsha ophezulu okanye ihip-hop, umzekelo? Uhlobo kunye nohlobo lwengoma zivumela izigqibo ukuba zitsalwe malunga nesimo sengqondo.
Kule meko, umculo omnandi nozolileyo ubonakalisa ukoneliseka kwaye ibhalansi yangaphakathi. Iimpawu ezothusayo nezingathandekiyo, kwelinye icala, zigqibe ukungqubana kwengqondo. Isimboli siyakubongoza ukuba ujongane noku kwaye ufumane isisombululo.
Uphawu lwephupha «irekhodi» - ukutolika kokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, umculo kunye nezingqisho abazivelisayo zibonisa unxibelelwano lomphuphi kunye nobuthixo.